PATRIOTIC WAR VETERANS OF BURMA: February 2011
UNSC Resolution on Libya SendsaMessage to Other Regimes
By LALIT K JHA Monday, February 28, 2011
WASHINGTON—The unprecedented unity shown by the powerful 15-member United Nations Security Council (UNSC) in passingastrong resolution against Libyan leader Muammar Al-Gaddafi, includingatravel ban and asset freeze, also sendsatough warning to other hardline regimes, including Burma's military junta.
The resolution, passed unanimously late Saturday night after hours of debate, sendsastrong message that the international community will no longer tolerate regimes across the globe that kill their own citizens or commit gross human rights violations to hold onto power.
“It is obvious that this referral is going well beyond Libya,” France's ambassador to the UN, Gerard Araud, told reporters Saturday night followingadecision by the UNSC to refer Gaddafi and his cronies to the International Criminal Court (ICC) for alleged crimes against humanity.
Despite their initial reservations on this issue, China and India both finally agreed to go along with the rest of the Security Council in passing the resolution. This is particularly notable in the case of China, which in the past has used its veto power to block moves by Western countries led by France to invoke the “responsibility to protect” principle in the case of Burma.
This will make it more difficult in the future for China to block strong international action against the Burmese regime, as it did following the bloody crackdown on monk-led protests in September 2007 and in the aftermath of Cyclone Nargis in May 2008, when the junta was accused of dragging its heels in response to the disaster, resulting in thousands of deaths.
The decision to condemn Gaddafi—and the newfound willingness of China and others to recognize the need to take strong action against oppressive regimes—was immediately applauded in Washington.
“The Security Council resolution, which was passed in record time and included countries that are often reluctant to empower the international community to take such actions, sendsastrong, unmistakable signal,” US Secretary of State Hillary Clinton told reporters traveling with her on her way to Geneva to attend the meeting of the UN Human Rights Council.
Araud, the French ambassador, went even further in describing the move asasignificant break from the past, calling the ICC referral “a warning to all the leaders who could be tempted to use repression against this wind of change, this wind of liberty. We feel it, we felt it in the Security Council chamber, we feel it in the corridors of this organization.”
“There is an earthquake going on, and it has reached New York. I don’t know if there will beatomorrow. I do hope there will beatomorrow. I do hope that responsibility to protect, international justice and sanctions against dictators will haveafollow-up and that dictators will listen to what is happening even in the usually prudent Security Council,” the French ambassador said.
It is noteworthy that France had moved to invoke the UN’s responsibility to protect option on Burma in response to both the 2007 Saffron Revolution and Cyclone Nargis, but was both times rebuffed by the Chinese. At the time, French Foreign Minister Bernard Kouchner suggested that the UN invoke this collective responsibility to protect the people of Burma.
China was not the only country that balked at the idea of invoking the responsibility to protect, or “R2P,” principle in response to the Burmese junta's handling of the Nargis relief effort. Although some experts called on the US and UK to join France in taking drastic action to deal with the disaster in Burma, neither country supported the move at the time.
“The United States and Britain should join with the French government and introducearesolution in the UN Security Council demanding that the Burmese government accept the offers of international relief supplies and personnel, let them enter the country immediately and without interference, and allow the UN to take charge of the humanitarian mission,” wrote Ivo Daalder,asenior fellow at the Brookings Institution, and Paul Stares, the director of the Center for Preventive Action at the Council on Foreign Relations, in The New York Times on May 13, 2008.
The Burmese expatriate community had also urged the UN to invoke the R2P principle to save the lives of people stranded in the Irrawaddy delta after Cyclone Nargis devastated the area.
“Now is the time to act. You have helicopters, ships and supplies ready and waiting. Stop waiting for China or the Burmese regime's approval and send aid now,” wrote Aung Din, the director of the US Campaign for Burma, inaletter addressed to heads of state in the aftermath of Cyclone Nargis.
General Than Shwe, right, greets guests at the 64th anniversary of Union Day Saturday on Feb. 12, 2011, in Naypyitaw, Burma Khin Maung Win / AP
Astrology, superstition and black magic are common in Southeast Asia, and Burma's rulers have rarely made any bones about their beliefs. But, in what appears to be an attempt to tamp down on all the talk over Than Shwe's television appearance, state-controlled media outlets have now denied access to Internet pages showing him attending the Feb. 12 ceremony for the national holiday Union Day. "I suspect that the Union day web page is being blocked precisely because there is speculation over whether Than Shwe is performing yadaya," says Ingrid Jordt, an anthropologist and specialist on Burma at the University of Wisconsin.
According to Wai Moe,ajournalist with the Irrawaddy, an online magazine run by Burmese exiles, two interpretations of the the general sportingaladies' sarong have gained the most currency. The first is that astrologers have predictedawoman will rule Burma, and so by donning women's clothes, Than Shwe and the other generals are attempting to fulfill the prophecy through some superstitious sleight of hand. The second, fuzzier interpretation, is that by dressing in women's clothing, the generals are somehow trying to neutralize Suu Kyi's power. After Than Shwe brutally suppressed an uprising led by Burmese monks in 2007, anti-regime activists launchedacampaign asking people to send women's underwear to the leader because they said the generals believe that contact with women's underwear will sap their power. By wearing sarongs, they may believe they are cancelling out Suu Kyi's ability to sap what they view as the virile male power that underpins their leadership. If this train of thought doesn't appear to follow logic, it is, after all, superstition. And these stories have circulated in Burma before, particularly about former intelligence chief Gen. Khin Nyunt, who was also said to have dressed asawoman to counter the power of Suu Kyi. Though these theories appear to be widely believed in Burma, the nation's rulers almost never give interviews, so they remain unconfirmed.
What isn't hard to confirm is that less than four months after releasing Suu Kyi from her latest term of house arrest, the regime's attitude towards the Nobel Peace Prize winner is once again hardening. After Suu Kyi recently reconfirmed her support for economic sanctions against the regime,astate-run newspaper ominously warned last week that she and her followers would meeta"tragic end." She and her supporters have little reason to think they're bluffing: In 2003,agovernment-organized mob attacked Suu Kyi and her followers in northern Burma, killing dozens.
Burma held elections in November 2010 to try and putademocratic face onacountry controlled by its military. But Than Shwe's notions of leadership are known to be based more on divine rule than democracy, and Jordt says his choice of dress that day may instead have to do with the fact that the patterns of some women's sarongs are based on patterns worn by Burma's royalty more thanacentury ago. "Than Shwe is simply trying to dress in the style of bygone kings. Than Shwe's evocation of royal politics assertsavery Burmese and Buddhist idea about what the terms of political legitimacy are,'' Jordt says. She added that, for some time now, Than Shwe has required that royal courtly language be used in reference to him and his wife, Kyaing Kyaing. If the other generals who joined their boss that day have any reservations about wearing women's sarongs, they aren't saying, lest they end upavictim of one of Than Shwe's periodic purges, as happened to former intelligence chief Gen. Khin Nyunt in 2004. Whether he'sareincarnated Burmese king, or just another old drag queen, Than Shwe's subordinates know it's never wise to cross Burma's cross-dressing senior general.
Read more: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2053563,00.html#ixzz1FD2DACBu
By ရော်နီညိမ်း စနေ, 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2011
တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား (၀၄၉)
မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) နဲ့ ကာကွယ်ရေး ဒုတိယ၀န်ကြီး ခန့်အပ်ရေး အတွက် ၁၉၇၄ ပထမ အကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ အခြေအတင်ဖြစ်ရပုံ၊ ၁၉၈၈လူထုအုံကြွမှု ကာလမှာ တပ်မတော် (လေ)က တပ်မတော်(ကြည်း)ရဲ့အမိန့်ကို မနာခံပဲ နေခဲ့ပုံ၊ ဒီကနေ့ လစ်ဗျားတပ်မတော် မှာ အမိန့်မနာခံတော့တဲ့ ‘ဒုတိယအတွေး’ (second thought) ၀င်သွားခဲ့ပုံ၊ စတာတွေကို အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ် ကြီး သူရဦးတင်ဦး၊ တပ်မတော်(လေ) အရာရှိဟောင်းတဦးနဲ့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်းစိုင်းဝင်းကျော်တို့က ဒီသီတင်း ပတ်ရဲ့ “တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား” အပတ်စဉ်ကဏ္ဍမှာ ပြောပြထားပါတယ်။ ဦးရော်နီညိမ်းက “စစ်တပ် နှင့် အမိန့်နာခံမှု - အပိုင်း (၆)” ခေါင်းစဉ်နဲ့ စီစဉ် တင်ဆက်ထားပါတယ် ။
ဦးတင်ဦး။ ။ အဲဒီ ၀န်ကြီးချုပ် (အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးချုပ်) ဗိုလ်ချုပ်စိန်ဝင်းကို ဒါနဲ့ပတ်သက်တာ အားလုံးက တော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကျနော် လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ သွားပြောတော့၊ ကျနော် တော်တော်လေးပြောဆိုပြီးတော့ ၀န်ကြီးချုပ်က ကျနော်ပြောတာကို လက်ခံလိုက်တယ်။ လက်ခံလိုက်တော့ အဲဒီမှာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး က စနေပြီ ခင်ဗျ။ လွှတ်တော် သဘာပတိက ကယားပြည်နယ်ဥက္ကဌ ခင်ဗျ။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို (၁၅) မိနစ်လောက် ဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်၊ ပြန်ပြီးတော့ နောက်ထပ် ကျနော်တို့ ကျကျနနပြန်တင်လိုက် တဲ့ အခါကျတော့၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတင့်ဆွေက ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးပဲ ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်၊ အဲဒါကို နောက်ဆုံး အဆိုတင်လိုက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ကျသွားတာပဲ ခင်ဗျ။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ပထမ list မှာ ဒုဝန်ကြီးက ဗိုလ်မှူးကြီးတင့်ဆွေ ပါမလာဘူးဆိုတော့ ဘယ်သူ က ပါလာပါသလဲ ခင်ဗျ။
ဦးတင်ဦး။ ။အဲဒါ သူတို့ မဆလ ဘက်ကနေပြီးတော့ ပါတီဌာနချုပ်ကနေ တယောက်ထည့်လိုက်သေး တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်တယောက် ထည့်လိုက်သေးတယ်။ နာမည်တော့ ကျနော် သိတယ်။ မပြောတော့ပါဘူးဗျာ။ ထား ပါတော့။ သူတို့ကို အောက်ကနေ ပါတီကနေပြီးတော့ faction ရိုက်လိုက်သလား မသိဘူးလေ။ ညှပ်ပြီးထည့် လိုက်ပြီးတော့ ကပ်ပါသွား တာ။ ကျနော် တော်တော် စိတ်ဆိုးတယ်၊ အဲဒီတုန်းက။ ဒီလို ခင်ဗျားတို့ ဒီလိုလုပ် လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျ လို့၊ မူလက ကျနော်တို့ ဒီအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ပြီးသားကို ဟိုဘက်ကနေ၀င်ပြီး ဒီလို ထိုးတာ တော့ ကျနော် လက်မခံနိုင်ဘူးပြောတော့၊ နောက်ဆုံး ၀န်ကြီးချုပ်ကလည်း ကျနော်ပြောတာကို သဘောတူ တယ်။ ကျနော် တဆင့် လျှော့ပေးလိုက်ပြီးပြီလေ။ ပြီးတော့ ဒီ ကိစ္စမှာလည်း သူက senior အဖြစ်ဆုံးပဲဗျ။ (မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် ပထမဆုံး တည်ထောင်ခဲ့သော အမှတ် (၇၇) ခြေမြန်တပ်မ) တပ်မမှူး အရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ လူပါ။ အကျင့်စာရိတ္တမှာ အစစအရာရာ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်လည်း ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်က သူ မပါ လာရင် မဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး တင်တော့၊ ရသွားတယ် ခင်ဗျ။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတင့်ဆွေကို ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် nominateလုပ်ဖို့ဟာ ဗိုလ်မှူးကြီးကြည် မောင်က အဆိုတင်သွင်းတယ် ဆိုတော့၊ အဲဒီ ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင်က အင်္ဂလန်သံအမတ်ကြီး လုပ်သွားပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး လည်း လုပ်သွားတဲ့ အဲဒီအချိန်က စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး (ကြည်း) လုပ်နေတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင်ပေါ့နော်။ NLD ဦးကြည်မောင် မဟုတ်ဘူးပေါ့။
ဦးတင်ဦး။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်း သံအမတ်လုပ်သွားပြီး၊ ပထမ Colonel GS လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ကြည် မောင်ပါ ခင်ဗျ။ ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ one and half ဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဦး (နံပါတ်တစ် ခေါင်းဆောင် ဦးနေ၀င်း နှင့် နံပါတ်နှစ်ခေါင်းဆောင် ဦးစန်းယုတို ကြားမှာ နေရာဝင်ယူထားသောကြောင့်၊ နိုင်ငံခြားမီဒီယာ တွေက one and half ဟု အမည်ပေးထားခဲ့သော တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူး နှင့် ပါတီ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်ခဲ့သူ ကွယ်လွန်သူ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းတင်ဦး) က ယူလာတာပဲလေ။ သူက ဒီလို ပြောလိုက်တယ်လို့ ပြောတာကိုး။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးပေါ့ နော်။
ဦးတင်ဦး။ ။ သိတယ်နော်။ ထောက်လှမ်းရေးကပါ။ နောက်တော့ ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦး၊ ဦးနေ၀င်းရဲ့အနားမှာ တောက်လျှောက် အတူတကွ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူဆိုတော့၊ သူ့ဆီက ဒီဟာက signal ပါလာတယ်ပေ့ါ ဗျာ။ အဲဒီဟာ ပါလာတယ်ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်တာကနေ၊ ပြန်ဆွေးနွေးကြပြီးတော့ ဒီလို ဖြစသွားကြတာပဲ လေ။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဒါ အန်ကယ်တို့ အရင်တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အန်ကယ်က ဒုချုပ် (ကြည်း)ကို အများဆန္ဒအရ ဗိုလ်မှူးကြီးတင့်ဆွေကို ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်သင့်တယ်လို့ အများက လည်း ယူဆထားပေမယ့် အာဏာရှင်က ဒါဖြစ်စေဆို အကုန် လိုက်ဖြစ်ရတာကို၊ အန်ကယ် ဘယ်လိုမြင်ပါ သလဲ။
ဦးတင်ဦး။ ။ ဟိုတုန်းကတော့ ကေဒါမြှုပ်နှံရေးမူဆိုပြီးတော့ (ပါတီ)ဗဟိုကနေ ထည့်ပြီး မြှုပ်နှံလိုက်တယ်။ မထူးပါဘူး။ ခုလည်း အရင်ပုံစံအတိုင်း သွားတာပါပဲ။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ၁၉၈၀ခုနှစ် နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာလည်း ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေးကိုဟာ အငြိမ်းစားယူပြီးတော့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖြစ်သွားတဲ့ အချိန်မှာ၊ လစ်လပ်သွားတဲ့ ဒုချုပ်(ကြည်း) နေရာကို ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း ဖြစ်တဲ့ ပါတီရဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ထောက်လှမ်းရေးဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးက ဗိုလ်ချုပ်တင်စိန်ကိုပေးဖို့ စီစဉ်ခဲ့ ပေမယ့်၊ တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ကစစ်ခေါင်းဆောင်တွေက လက်မခံကြလို့ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲ ဖြစ်တဲ့ ဒုချုပ်(ကြည်း)ရာထူးနေရာမှာ လပေါင်းများစွာ လစ်လပ်နေပြီးတော့၊ နောက်ဆုံးမှာမှ အခြေအနေအား လုံးကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဦးနေ၀င်းက၊ အခုအခါ တစည (တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး) ပါတီဥက္ကဌ၊ ထိုစဉ်ကတော့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းရီကို ဒုတိယကာ ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှု အရေးတော်ပုံကာလမှာ တပ်မတော်(လေ)မှာ အမိန့်မနာခံဘဲ ဖြစ် ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တခုကတော့၊ အခုအခါမှာ လစ်ဗျားနိုင်ငံက ဗိုလ်မှူးကြီး မွမ်မာကဒါဖီ Moammar Gadhafi ရဲ့ ဆန္ဒပြလူထုကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ဖို့ ပေးတဲ့အမိန့်ကို မနာခံတဲ့ လစ်ဗျားလေတပ်က ဖြစ်စဉ်နဲ့ ဆင်တူလွန်းလှ တယ်လို့၊ တပ်မတော်(လေ) အရာရှိဟောင်းတဦးက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
တပ်မတော်(လေ) အရာရှိဟောင်း။ ။ ကျနော်တို့ အဲဒီ အဖြစ်အပျက်ကလေးကတော့ ဖြစ်ခဲ့တာပဲ လေ။ မြောက်ဥက္ကလာပမှာ တပ်မတော်(လေ)က တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ အပေါ်ကနေ အနည်းဆုံးပေါ့လေ၊ ပစ်ဖို့လို့ ဗုံးကြဲဖို့လို့ အဲဒီလို အမိန့်ထွက်လာတဲ့ အခါကျတော့၊ ပထမတုန်းကတော့ အဲဒီလို ပစ်ဖို့ အမိန့်မဟုတ်ဘူး ဗျ၊ အနည်းဆုံးတော့ အပေါ်ကနေ ဗုံးအတုချဖို့ ပေါ့၊ အဲဒီလို ပြောတော့ အဲဒီမှာ တချို့အရာရှိတွေက အပေါ်က လေယာဉ်ကနေ ဘာပဲပစ်ချချ အောက်ကို တခုခု ကျသွားရင်၊ ဗုံးမဟုတ်သော်လည်း လေတပ်က ဗုံးချတယ် ဆိုပြီးတော့ ပြဿနာ တက်နိုင်တယ်။ သူတို့ မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုပြီးတော့ ငြင်းကြတယ်ဗျ။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ အဲဒီတော့ (ဒုတိယ)ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တင်ထွန်း ကို တပ်မတော်(ကြည်း)က ပေးတဲ့အမိန့်ကို၊ တခါ ဗိုလ်ချုပ်တင်ထွန်းက တပ်မတော်(လေ)ကို ဘယ်လိုပြန်ပြီး အမိန့်ပေးပါသလဲခင်ဗျ။ စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး(လေ) ကနေ တဆင့် ပေးတာလား ဒါမှမဟုတ် မင်္ဂလာဒုံက (၅၀၂) လေတပ်စခန်းကို တိုက်ရိုက်ပေးတာပါလား ခင်ဗျ။
တပ်မတော်(လေ) အရာရှိဟောင်း။ ။ တိုက်ရိုက် အမိန့်ပေးပုံရတယ် ခင်ဗျ။ အဲဒီလို တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေး တာကို အောက်က လေသူရဲအရာရှိတွေက နေပြီးတော့၊ မလိုက်နာနိုင်ပါဘူး ဆိုပြီးတော့၊ သူတို့ကနေပြီး တချို့အရာရှိတွေက လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ ထွက်တော့မယ်ပေါ့။ ကျနော်တို့ကို ဒီလိုအမိန့်ပေးလာရင် မလုပ် နိုင်ဘူး၊ လက်မှတ်ထိုးပြီး ထွက်မယ်ပေါ့။ နောက်တခါ ကျနော်တို့ လေယာဉ်တွေမှာ ဗုံးတွေ တပ်ဆင်ပေးတဲ့ အခါကျတော့၊ အရာရှိမဟုတ်တဲ့ အခြားအဆင့်ရဲဘော်တွေက လက်နက်တို့ ဗုံးတို့ တပ်ပေးရပါတယ်။ အဲဒီလို တပ်ပေးရတဲ့အခါ၊ သူတို့ကလည်း ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို လက်နက်တွေဗုံးတွေ တပ်ရတာလဲ ဆိုပြီးတော့ သံသယ ရှိတယ်။ အဲဒီလို သံသယရှိလာပြီး သူတို့ကလည်း လေယာဉ်ဘေးနားမှာ တခါထဲ၊ လေယာဉ်မှာ ဗုံးတပ်ဖို့ကို မလုပ်တော့ဘူးဗျ။ မတပ်ကြတော့ဘူး။ လက်နက်တပ်ဖို့ ဗုံးတပ်ဖို့ကို သူတို့ မတပ်ကြတော့ဘူး။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီတုန်းက (၅၀၂) လေတပ်စခန်း စခန်းမှူးက ကျနော်တို့ သိထားတာကတော့ ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင် ပေ့ါနော်။ စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်သင်တန်း အပတ်စဉ် (၁)ကပဲ၊ ဆင်းပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်က၊ အဲဒီအချိန်မှာ တန်းစီပြီးတော့ လေသူရဲတွေကို ဒီအမိန့်ကို ပေးတာလား ခင်ဗျ။
တပ်မတော်(လေ) အရာရှိဟောင်း။ ။ ဟုတ်တယ်ဗျ။ သူလည်း အဲဒီတုန်းက အထက်က အမိန့်ကြောင့်ထင် တယ်။ အားလုံးကို “မင်းတို့ ဒီလို လုပ်ကြ” ဆိုပြီးတော့ အမိန့်ပေးတဲ့ သဘောပဲ။ ဒါပေမယ့် ခုနက ပြောသလို ပေါ့၊ ရဲဘော်တွေကလည်း မနာခံ၊ အရာရှိတွေကလည်း မနာခံတဲ့အခါကျတော့၊ သူတို့ မလုပ်တော့ မလုပ်ဖြစ် ပါဘူး။ အဲဒီအချိန်က ဖြစ်နေတာကတော့ တပ်မတော်ကလည်း ဘယ်ဘက်လိုက်ရမှန်း မသိဘူးဗျ။ သို့သော် လည်းပဲ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် တပ်မတော်သားတွေကလည်း အဲဒီအချိန်ကဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ၊ လက်ရှိ သူတို့ ခံစားနေရတဲ့အခြေအနေကို သူတို့ ကျေနပ်ကြတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်ဘက်လိုက်မယ် ညာဘက် လိုက်မယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ သို့သော် မတရားတာက မတရားတာပဲ ပေါ့။ ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကို လေယာဉ်ပျံပေါ်ကနေ ဗုံးကြဲချပြီးတော့ ပစ်သတ်ရမယ်ဆိုတာကတော့ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး လေ။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဘယ်သူမှ ဒီအမိန့်ကို မလိုက်နာဘဲနဲ့၊ အဲဒီအချိန်မှာတော့ အနည်းဆုံးတော့ သူတို့တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို သူတို့ တကယ် ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ကို ဒီလိုအမိန့်နဲ့ အာဏာနဲ့ ခိုင်းလာရင် ကျနော်တို့ မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ကျနော် တို့ ထွက်မယ်ဆိုပြီး တချို့အရာရှိတွေက လက်မှတ်ထိုးပြီး ထွက်စာတင်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့တာ ကျနော်တို့ သိခဲ့ရ ပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီတော့ တပ်မတော်(လေ)(၅၀၂)လေတပ်စခန်းက လေသူရဲတွေက၊ ဒီအလုပ် ကို မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး အမိန့် မနာခံတဲ့အခါမှာ၊ တပ်မတော်(ကြည်း)က ဘာများ ဆက်လက်အရေးယူ ဆောင် ရွက်တာ ရှိပါသလဲ ခင်ဗျ။ ဧရာဝတီရေတပ်စခန်းဆိုရင် လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီး၊ အပြင်ကနေပြီးတော့ army တပ်ရင်းတရင်းနဲ့ ၀ိုင်းထားသလို (၅၀၂) လေတပ်စခန်းကိုရော တပ်မတော်(ကြည်း)က တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေက အပြင်က ၀ိုင်းထားတာ ရှိပါသလား ခင်ဗျ။
တပ်မတော်(လေ) အရာရှိဟောင်း။ ။ အဲဒီလိုတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ကို အပေါ်ကနေ အနည်းဆုံးတော့ စာကြဲချဖို့ အမိန့်ပေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် “လူစုခွဲပါ။ လူစုမခွဲရင် ပစ်မယ်” ဆိုတဲ့ စာပေ့ါနော်။ အဲဒီဟာမျိုးတွေ ကျနော်တို့ ကြဲချခဲ့ရပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ "စစ်တပ် နှင့် အမိန့်နာခံမှု" ကို လေ့လာနေစဉ်မှာပဲ မျက်မှောက်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကောင်းဆုံး နမူနာဥပမာကတော့ လစ်ဗျားနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေပါပဲ။ စစ်တပ်ကြီးကို ထူထောင်လာခဲ့တဲ့ လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကြီးမွမ်မာကဒါဖီရဲ့ အမိန့်ကို မနာခံဘဲ တော်လှန်ပုန်ကန်ကြပြီးတော့၊ ဆန္ဒပြ လစ်ဗျားပြည်သူလူထုနဲ့ ပူးပေါင်းသွားကြတဲ့ အခြေအနေတွေကို မြန်မာ့တပ်မတော် အရာရှိဟောင်းတွေ ဖြစ် ကြတဲ့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း စိုင်းဝင်းကျော်၊ အသံလွှင့်ဆောင်းပါးရှင် ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဦးမြတ်နိုး၊ ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ်၊ ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဦးစိုင်းသိန်းဝင်း တို့နဲ့လည်း လစ်ဗျားစစ်တပ်ရဲ့ အမိန့်မနာခံမှု အခြေအ နေကို၊ ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဒီ လစ်ဗျားကို ကြည့်လိုက်ရင်၊ အကုန်လုံးက ကဒါဖီ ပေးကျွေး ထောက်ပံ့မှုနဲ့ ကြီးထွား လာတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေချည့်ပဲ၊ အခု သူ့ကို အကုန်လုံး အမိန့်မနာခံကြဘူး ဖြစ်နေတာ။ အဲဒီတော့ ဒါက ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် breaking point လို့ ခေါ်တာပေါ့နော်။ ဒီ ကျိုးပေါက် ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့ point (ဆုံမှတ်) တစ်ခုကို ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ မရဘူး။ ဘယ်လိုမှ သူတို့ ဆက်ပြီး သစ္စာမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ breaking point ကို ရောက်သွားတာ ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီ breaking point က ဘာလဲဆိုတော့ ရက်ပိုင်းလေး အတွင်းမှာ လူတွေကို ရာနဲ့ထောင်နဲ့ ချီပြီးတော့ အကုန်လုံး ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်လိုက်တာကို လုပ်လာတဲ့အခါ မှာ၊ မကြိုက်တဲ့ သဘောမတွေ့တဲ့ တပ်မှူးတပ်သားတွေ အကုန်လုံး ကဒါဖီကို အာခံကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာလို့ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းရတဲ့ အခါမှာ second thought ပေါ့၊ ဒုတိယအတွေး ဖြစ်တဲ့ “ငါတို့ မှားနေပြီလား ? ငါတို့ခေါင်းဆောင်တွေ မှားနေပြီလား ?” ဆိုတဲ့ အဲဒီ second thought ကို တွေးသွားလိုက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို၊ တွန်းပို့မယ့် breaking point ကို တပ်မှူးတပ်သားတွေ ကျော်ဖြတ်နိုင် ပါ့မလား၊ ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ ခင်ဗျ။ ပထမဦးဆုံး ဦးစိုင်းဝင်းကျော်က ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျ။
ဗိုလ်ကြီးစိုင်းဝင်းကျော်။ ။ သိပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ breaking point သူတို့ ရောက်လာတဲ့ အချိန်ကျရင် တော့၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှ မျဉ်းတစ်ခုကို သူတို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြတ်ပြတ်သားသား ကျော်ဖြတ် လိမ့်မယ်၊ ကူးပြောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ် ခင်ဗျ။ အခြေအနေတွေကလည်း အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်လာဖို့အတွက် တောင်းလည်း တောင်းဆိုနေတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်လာဖို့ အလားအလာတွေကလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ အမှန်တရားကို သိနားလည်တဲ့ အင်အားစုတွေကလည်း၊ တပ်မတော်ထဲ မှာ အများကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ အတိုင်းအတာ ကာလတခုအထိ၊ အဆုံးအဖြတ်ပေးရမယ့် အဲဒီ ကာလကိုရောက် လာပြီး မျဉ်းတစ်ခုကို ဖြတ်ကျော်မယ်ဆိုရင် အဓိက ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည့်မှုရှိဖို့ လိုပါတယ် ခင်ဗျ။ နောက်ပြီးတော့ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် သတ္တိရှိရှိနဲ့ ယူရဲဖို့ လို တယ်။ ကိုယ့်သမိုင်းကို ကိုယ် ရေးဖို့လိုတယ်၊ အဲဒီ ကိုယ်ရေးတဲ့ သမိုင်းဟာလည်း အမှန်တရားဘက်ကို ရပ်တည်တဲ့ သမိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ အဲဒီအမှန်တရားက နောင်တချိန်မှာ စကားပြောလာပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျ။ အဓိက ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်က ဘာလဲဆိုတာ၊ တိတိကျကျ ဝေဖန် ဆန်းစစ်ဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လုပ်ရမယ့် ကာလတခုကို ရှေ့အနာဂတ်မှာ ရောက်ချင်လည်း ရောက်လာမှာပါ။ ရောက်လာမယ်ဆိုရင် လိမ္မာပါးနပ်စွာ နဲ့ မျဉ်းတစ်ခုကို သတ္တိရှိရှိ ယုံကြည်မှု အပြည့်အ၀နဲ့ ဘယ်လိုကူးဖြတ်မလဲ ဆိုတာ သမိုင်းက တောင်းဆိုနေပါတယ်။ မတရား မှုတွေ အားလုံးရဲ့ နောက်ဆုံးနိဂုံးဟာ ပြန်ပြီးတော့မှ တွန်းလှန်တဲ့ အနေအထားနဲ့ နိဂုံးချုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကျနော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိဖို့ လိုပါတယ် ခင်ဗျ။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ သောတရှင်များ ခင်ဗျာ၊ ရှေ့သီတင်းပတ် စနေနေ့ မနက်နဲ့ ညနေခင်းတွေမှာတော့ ဗီအိုအေ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် “တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား” ကဏ္ဍမှာ “စစ်တပ် နှင့် အမိန့်နာခံမှု အပိုင်း (၇)” ကိုဆက်ပြီး ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်။ စောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါ။ ကျနော် ရော်နီညိမ်းပါ။
February 27, 2011 Peter Simpson | Beijing
But few heeded the call to attend the gatherings. Several senior government officials this week rejected claims China could be hit by protests like those that have rippled across the Middle East.
Mustafa Abdel-Jalil, Libya's ex-justice minister (Feb. 23, 2011)
February 27, 2011 VOA News
Libya's former justice minister says he has formedatransitional government based in the country's east, the focal point of an uprising against Libyan leader Moammar Gadhafi. Mustafa Abdel Jalil made the announcement in an interview with Qatar-based television network Al-Jazeera late Saturday. Abdel Jalil says the transitional government is based in Libya's second-largest city of Benghazi and includes military and civilian figures. He says it will lead for "no more than three months" to prepare for "fair elections" enabling the Libyan people to choose their leader.
Abdel Jalil quit as Gadhafi's justice minister last week and joined the revolt that began earlier this month against the Libyan leader's 42-year rule. It is not clear how much support Jalil's caretaker government has in opposition-held communities. Anti-government protesters backed by defecting army units have seized control of eastern Libya and several parts of the west after battles with pro-Gadhafi forces. Libya's Ambassador to the United States Ali Aujali said Saturday he supports the caretaker government established by Abdel Jalil. Aujali is one of many Libyan diplomats around the world who have broken ties with Gadhafi since the uprising started. The U.S. State Department had no immediate comment on Abdel Jalil's move.
Gadhafi still controls the Libyan capital, Tripoli, in the country's northwest. Armed Gadhafi loyalists patrolled the city in all-terrain vehicles Saturday,aday after he promised to supply his supporters with weapons to defend his leadership. Many Tripoli residents stayed in their homes, terrified of encountering pro-Gadhafi militiamen who have shot and killed scores of opposition protesters this month. Some residents gathered Saturday to attend the funeral of an anti-government demonstrator who was shot Friday.
Gadhafi's son, Saif al-Islam Gadhafi, told journalists that most of Libya was "calm" and "peaceful." He described opposition forces controlling the western cities of Misrata and Zawiya asaminor problem. U.N. Secretary-General Ban Ki-moon says reports indicate more than 1,000 people have been killed in Libya's uprising.
U.S. consulate employee Raymond Davis is escorted by police and officials out of court in Lahore, January 28th, 2011.
Tariq Saeed / Reuters
By OMAR WARAICH Saturday, Feb. 26, 2011 TIME
The CIA has opened direct negotiations with its Pakistani counterpart, the Directorate for Inter-Services Intelligence (ISI), in an effort to secure the release of one its contractors who is standing trial in Pakistan for double murder. Officials familiar with the discussions told TIME that the negotiations began on Wednesday when Lieut. General Ahmed Shuja Pasha, the director-general of the ISI, receivedacall from CIA Director Leon Panetta. Panetta's call came justaday after the U.S. and Pakistani military leaderships met foraprescheduled meeting in the Gulf emirate of Oman, where the case of the CIA contractor was also discussed. Leading up to the meeting, Admiral Mike Mullen, head of the U.S. Joint Chiefs of Staff, had spoken with Pakistan Army chief Gen. Ashfaq Parvez Kayani at least three times about the contractor.
For the ISI, the Davis affair has offeredarare opportunity to exercise leverage over the CIA and even the civilian government of President Asif Ali Zardari. "It's the first time that the CIA has been caught with its pants down," saysaPakistani official. The ISI had facedaseries of embarrassing allegations in recent years. "This is an unequal relationship," adds the official. "The Americans bully because Pakistan is in the weaker position. And Pakistanis retaliate in an effort to increase their leverage. It is somehow built into an unequal relationship withajunior partner not being comfortable playing the roleajunior partner."
(Why is Raymond Davisathreat to Zardari's government?
Davis, according to Pakistani officials, had been spying on Lashkar-e-Taiba (LeT), an outlawed militant group that has been involved in the anti-Indian Kashmir insurgency, and other "Punjabi jihadi groups." LeT is also believed to be responsible for the November 2008 Mumbai massacre. Pakistan has so far refused to hand-over the group's leaders. The LeT's chief, Hafiz Saeed, is supposed to be under house arrest but still manages to appear occasionally to lead public rallies.
The CIA and the ISI appear to be at odds over the nature of LeT's activities. "The CIA had told the ISI that it believes that LeT is working with al-Qaeda," saidasenior Pakistani official familiar with the discussions. In response, the ISI is said to have denied this was the case. According to the official, the CIA subsequently enlisted the services of contractors, like Davis, to independently establish whether the link existed.
The CIA, however, had not secured authorization from the ISI for the contractors to operate in Pakistan, Pakistani officials said. However, there were no established rules, either. "The ISI never said that the CIA or the Department of Defense couldn't have contractors," saidasenior Pakistani official. "They weren't there with Pakistan's authorization, but they were there with Pakistan's knowledge. The ISI knows who these people are, but they want to control them, they want to know what their assignment is."
The ISI has said publicly that it had no knowledge of the contractors, and has alleged that the pro-U.S. government of President Zardari secretly slipped them into the country. Officials close to Zardari deny the charge. Davis, saidasenior Pakistani official, was issued his first visa in October 2009, foraperiod of three months. Subsequently, he was granted two extensions in Islamabad. "When visas are processed in Islamabad, they are vetted by the Foreign Office, the ISI, and the Ministry of Interior," saysasenior official. "Of course they knew who he was."
The current negotiations over Davis's fate, saysasenior Pakistani official familiar with the discussions, are trying to hammer out an agreement whereby there would be some "face-saving" for the Pakistanis in exchange for the American's release. Initially, the ISI had floated the suggestion that Washington relax its demands that Davis be released under diplomatic immunity and offer compensation to the victims' families. Under Pakistani law, "blood money" is recognized asameans of settlingacase of murder. "The two sides are trying to put it back into the box," says the senior official.
At the heart of the dispute is an enduring history of mistrust. The CIA, saidaPakistani official, does not trust the Pakistanis enough to take them at their word. The problem, the official said, is that even if the U.S. were to agree to withdraw all contractors, the ISI would not allow CIA case agents to investigate the activities of groups like LeT. "Pakistanis have to figure out whether we want to look upon the U.S. as an ally or an adversary," saidasenior Pakistani official, lamenting the tumultuous nature of the relationship with the U.S.
And, in the background is the future fate of Afghanistan. The army and the ISI, Pakistani officials said, were frustrated with the lack of progress over negotiations toward an endgame settlement there. Pakistan covetsarole as the principal interlocutor with militant groups like the Afghan Taliban. Last year, General Kayani hand-delivereda14-page document outlining Pakistan's view. "The U.S. has said that it understands their concerns," saysawestern diplomat. "But that's not the same as agreeing with those concerns." By applying pressure over Davis, the Pakistan military hopes to increase its bargaining power.
Toward that end, Zardari aides allege, the ISI is also looking to cut the civilian government down to size and control the relationship with the U.S. The president's aides accuse the ISI of being behind an orchestrated campaign of leaks to the local and international press that have whipped up anti-Americanism and painted the Zardari government as being too weak-kneed before U.S. demands. "They're also sendingamessage to the U.S.," saidaZardari aide. "They are saying, 'Deal with us, not the civilians.'" Since assuming power, Zardari has been forced to cede ground repeatedly to the powerful generals.
Some officials and analysts believe, however, that the army is in danger of overplaying its hand on this occasion. "This issue, with this [U.S.] Congress, could become really more problematic than anything we've had," says Christine Fair, assistant professor at the Edmund A. Walsh School of Foreign Service at Georgetown University. "The Pakistanis have been very ungracious about American support. We've been the biggest donors in terms of flood relief. And yet, the Saudis and the Chinese who've donatedafraction of that get all the genuflection."
In Pakistan, U.S. Diplomat's Arrest Related to2Deaths Stirs Tensions
...Was Raymond Davis Spying on Pakistan’s Babur Missile?...
Last Modified: 27 Feb 2011 01:24 GMT
The Voice 7-12 Posted by
Vijay Nambiar photo Google
By JOSEPH ALLCHIN Published: 25 February 2011 DVB
....click to read Nambiar, UN, undermine war crimes investigation on Sri Lanka, Burma ...
Libyan leader Muammar Gaddafi. Files
"I, Barack Obama, President of the United States of America, find that Colonel Muammar Gaddafi, his government, and close associates have taken extreme measures against the people of Libya, including by using weapons of war, mercenaries, and wanton violence against unarmed civilians," the Executive Order reads.
"I further find that there isaserious risk that Libyan state assets will be misappropriated by Gaddafi, members of his government, members of his family, or his close associates if those assets are not protected," it said. "I hereby declareanational emergency to deal with that threat."
According to international organizations, at least 2,000 people have been killed and thousands wounded in clashes with government forces since protests against Gaddafi's regime began on February 15.
"Additionally, the Secretary of State is suspending all existing licenses and other approvals for the export of defense articles and services to Libya," Obama's letter to Congress reads.
"Consistent with the president's tasking to the government to prepare options to hold the Libyan government accountable for its violation of human rights, we have decided to move forward with unilateral sanctions," he said.
WASHINGTON, February 26 (RIA Novosti)
25 February 2011 Last updated at 13:35 ET BBC News
While these have made it more difficult for Iran to acquire equipment, technology and finance to support its nuclear activities, they have not stopped trading in oil and gas - the major sources of Iran's income. ...Read IAEA full Report...
Iran nuclear plant suffers setback Tehran announces plans to remove fuel rods from Bushehr reactor while it carries out "technical work".
Aung San Suu Kyi Photo: REUTERS
ကြာသပတေး, 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2011 By Luke Hunt's Report in Burmese
Posted: February 23, 2011 07:59 AM At Dictator Watch, Roland Watson asks, "Why Are There No Protests in Burma?"
For her part, Aung San Suu Kyi has offered cautious support for the Egypt protests, while telling the Toronto Globe and Mail that she'd like to link up with pro-democracy activists via Facebook and Twitter. "I think we need to -- what do you call it -- raise the megabyte?"Meanwhile inapiece for Irrawaddy, The Dictator's Survival Guide, the Burmese exile publication's managing editor Kya Zwa Moe ponders why the junta has lasted for almost 50 years.
What are some of the secrets toadictator's survival? Here are some that Than Shwe and the Burmese generals have practiced: -- Crush all protests as soon as possible
-- Apply divide and rule techniques among dissidents and the public -- Show no sympathy toward any dissent (as Tunisian leader Ben Ali did for the street vendor.)
An earlier version of this post incorrectly stated the name of the author of "Why Are There No Protests in Burma?". This has been corrected.
(AP) YANGON, Myanmar (AP) — The top U.S. diplomat in Myanmar said Wednesday he has begun talking with pro-democracy leader Aung San Suu Kyi about what sort of aid Washington should offer the military-dominated nation.
© 2011 The Associated Press. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Posted by
Judge approves Assange extradition Last Modified: 24 Feb 2011 14:22 GMT
MOSCOW, February 23 (RIA Novosti) Relatives fleeing?
Wednesday's reports of attempted landing on Malta fueled speculation over whether family members of Gaddafi sought to flee.
United Nationalities Federal Council - Union Of Burma
Myanmar opposition leader hasafew words for China
By NBC New’ contributor*
When I told my mom I was going to Myanmar, her response was: “Myanmar? A lot of drugs there, right? Be careful!”
I wouldn’t call my mom ignorant. Most Chinese people know very little about their neighboring country, despite the long 1,242 mile border shared by northeast Myanmar and China’s Yunnan province. Chinese media doesn’t report much information on the country except occasional news stories on energy cooperation, the soon-to-be-built high-speed railway connecting Kunming (Yunnan province’s capital) and Yangon, (Myanmar’s largest city), the drug war skirmishes near the border area and about Burmese girls who are smuggled into China.
As the leader of the opposition National League for Democracy andapersistent champion for democracy and human rights, Aung San Suu Kyi is not frequently mentioned in Chinese media.
Which made me all the more curious to meet her when NBC News recently had the chance to interview her after her release from seven years under house arrest.
Given the fact that Myanmar’s military rulers appear to be takingahardline against Sui Kyi and her opposition party just three months after her release in November, we were probably lucky that we interviewed her when we got the chance. Myanmar’s rulers recently said that she and her party could meet “tragic ends” if they continue to support international economic and political sanctions against the country. What struck me most was that despite being awarded the Nobel Peace Prize in 1991 for “her non-violent struggle for democracy and human rights” and still being revered by many Burmese for beingavoice of freedom in repressive Myanmar, she spoke with us like she was justanext-door neighbor. .read more........
Gripen fighter jet pilots are givenawarmwelcome after the Swedish-made aircraft landed at Wing7base in Surat Thani. The air force is buying 12 fighters worthnearly40billion bahtto replaceageing F-5A/B aircraft. The first six jets arrived yesterday. SURAPOL PROMSAKANA
6 Gripen jets land, await official handover
Published: 23/02/2011 at 12:00 AM Bangkok Post
"It's different from the F5 jet I've flown before. It's likeasedan andasports car. Thailand is the only country in Asean to operate the Gripen."
By: Claude Moniquet ESISC Briefings
Since forty years – he overthrew King Idriss in 1969 with some other officers – has establishedakind of “pan-Arabic Islamic socialism” and, despite the fact that he proclaimed that he was not looking forathe power and that, with the Jamahiriya (“a neologism for “mass-state”) all the power was actually in the hands of the people, he rules Libya as his personal property, after having eliminated one by one, most all his comrades of the Revolution. Undoubtedly, Jamahiriya is everything but democratic. Libya isacruel state withaterrifying record on human rights and civil liberties. Only the fact that the country has enormous gas and oil reserves and that Gaddafi renounced toaWMD program (which was absolutely impossible to achieve given the lack of scientists, skilled engineers and technicians and the isolation of Libya….) explains that he was able to reintegrate the “international community” by the beginning of the 2000’s.
On February 21,agroup of religious scholars said “it isareligious duty to revolt against Muammar Gaddafi”.
Colonel Gaddafi escaped an assassination attempt in February 1996. Several bodyguards were killed. Information of Asharq Al-Awsat, based on “sources close to Qaddafi”, February 21.
Libya/Crisis: More army officers defect to opposition
On Tuesday, army officers led by Major General Mehdi El-Arabi Abdelhafid issuedastatement in which they called army to launchamarch on Tripoli and to support the opposition in ousting "the criminal regime of Gaddafi”.
Such statement was preceded byaseries of similar declarations issued over last hours by army officers and is indicative of the fact thatasubstantial part of the armed forces consider that Gaddafi’s regime will not be able to survive the crisis.
Date:22-02-2011 European Strategic Intelligence and Security Center
22 February 2011 Last updated at 11:42 ET Four Americans hijacked by Somali pirates off the coast of Oman have been killed by their captors, US defence officials say.
US forces boarded the ship without firingashot, then killed two pirates while they were taking control of the ship. They discovered the four Americans shot. The US Navy sailors attempted to provide first aid but the hostages died, the military said.
Pirates currently hold about 30 boats captured off the coast of Somalia, foratotal of more than 600 hostage, according to the US Navy.
The US has gained recent experienced prosecuting pirates in civilian courts.
by Operation Burma on Monday, February 21, 2011 at 11:51pm
...link to Facebook/Operation Burma...
22 February 2011 Last updated at 00:41 ET Two Iranian warships have entered the Suez Canal to makeapassage to the Mediterranean Sea, canal officials say.